Rise Archives — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर उठेर
पुस्तक अंश: यो बेन्च ईर्ष्या छैन
म उच्च विद्यालय मा varsity बास्केटबल प्ले. त्यो एक पूर्ण साँचो बयान छ (तपाईं शब्द प्ले परिभाषित गर्न मलाई जबरजस्ती नभएसम्म). म एउटा सानो निजी विद्यालय उपस्थित, र तपाईं एक वरिष्ठ थिए यदि तपाईं varsity टोलीको एक ठाउँ पायो. म बास्केटबल को खेल प्रेम, तर म धेरै राम्रो यसलाई प्ले भन्दा यो हेर्दै छु. म खेलाडी chastise र कराउने "C'mon गर्न सक्नुहुन्छ!"सबै-तारे कौशल संग रेफरी मा. तर जहाँसम्म यो जान्छ रूपमा छ. मेरो स्कूल वास्तवमा क्रम स्नातक मा खेल खेल्दै बारेमा यो अनौठो नियम थियो, हुनत, त्यसैले म अनुरूप र हरेक शुक्रबार राति लाज मेरो टाउको रचनाहरू बाध्य भएको थियो.
यो खडा सधैं घर खेल पूर्ण थिए. mine- तिनीहरूलाई को उत्साहित आमाबाबु र विद्यार्थी-धेरै साथीहरू टोलीमा समर्थन सम्म देखाए. दुःखको कुरा, तिनीहरूले म जस्तै शायद फरक धेरै रूपमा खेल बनेको. म समय समयमा गर्न Bleachers मा हुनेछ नजर, सबै मानिसहरू के सोच थियो सोच, विशेष गरी मेरो पिताजी. म त्यो हामी दुवै हेर्न बस थिए भनेर बुझे लाग्छ, तर म एक राम्रो बस्नुस् भयो.
मात्र समय म…
पुस्तक अंश खडा: 7:00 A.M. तर्क
म पन्ध्र वर्षको थियो र मेरो जीवन बाहिर भित्र गरिएका भइरहेको थियो. मेरो नाम र उपस्थिति परिवर्तन थिएन, तर मेरो बारेमा अरू सबै कुरा थियो. म एक पूर्ण बिभिन्न व्यक्ति म एक वर्ष वा दुई अघि भएको थियो भन्दा थियो. म मतलब छैन मान्छे कलेज र जाने नयाँ उपनाम र व्यक्तित्व संग आफूलाई पुनः सिर्जना जस्तै; म अर्थ महत्वपूर्ण कुरा मलाई भित्र मा गएका थिए. म एक मसीही भएका थिए. म नयाँ महसुस. म जिउँदो महसुस.
म सुन्न गर्ने कुनै यो घोषणा थियो कि राम्रो लाग्यो, विशेष गरी मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी र परिवारको. सबैलाई आनन्द मलाई-केही परिवर्तनको अलग प्रतिक्रिया, प्रतिरोध-तर एउटा कुराकानी अरूलाई सधैं मलाई उभिए छ.
म निकै सम्मान कसलाई पुरानो मानिस संग कुरा थियो, मेरो जीवन शैली परमेश्वरको आदर लागि मेरो खेल योजना व्याख्या गर्न रोमाञ्चित, विशेष मेरो यौन शुद्धता. म यसको बारेमा शान्त हुन प्रयास, तर यो सधैं मेरो उत्तेजना पकड गर्न कठिन थियो. शब्दहरू एक अस्वाभाविक गति मेरो जिब्रो बाट leapt रूपमा, म जस्तै उहाँले रूपमा उत्साहित थियो कि अर्थमा पायो. He was trying to…
को बोल खडा
यहाँ यात्रा गरेको पाँचौ स्टूडियो एल्बम लागि सबै गीत हो उठेर. प्रत्येक ट्र्याक लागि गीत हेर्न गीत शीर्षक क्लिक गर्नुहोस्. आनन्द र साथीसँग साझेदारी!
2. मा रोशनी
4. MANOLO फिट. Lecrae
5. तिमीलाई थाहा छैन
6. सबै खडा (Interlude)
7. सबै खडा
8. सुन्दर जीवन2(मेरो)
9. Insomniac फिट. एन्डी Mineo
10. केही नयाँ
11. लाजरस फिट. This'l
12. मेरो सबै प्रेम फिट. नेटली लरेन
13. म गईसकें
14. मीठो विजय फिट. Dmitri McDowell र लेआ स्मिथ
ट्रयाक 1: उठेर
आज दिन जब हामी सबै वृद्धि छ
मेरो एङ्कर त मलाई जीवित आउन हेर्न गएका गर्नुपर्छ
सँगै हामी बलिरहेको झूट विरुद्ध खडा
र म मेरो पखेटा फेला अब कि म जान तयार छु
उठेर, हामी सबै वृद्धि
हामी सबै वृद्धि
पर्ख म जस्तै यी ट्रयाक मा घमण्ड फिर्ता छु
म एम रिसाएको छु, थप्पड mics फिर्ता हुन सक्छ
आपत्ति कहिल्यै तथ्यलाई आपत्ति म प्रचार छु कहिल्यै बाँकी
सुन सही Gotta मलाई दुई पटक सोध्न छैन
म यहाँ छु, म को लागि जानिन्छ छु जस्तै उहाँलाई घमन्ड गर्न यहाँ छु
मान्छे निद्रामा घुर्नु गर्दा I'ma यसको लागि जाने
मेरा परमेश्वर कुनै लोकगीत छैन, 'उहाँले वास्तविक कारण, उहाँले वास्तविक
अब हात मा विषयमा
म डिजाइनर थाहा, उहाँले जसले आफ्नो हातमा डिजाइन बादल मा उड पाइलटहरूले भन्दा उच्च छ
म यो जीवन एक पैन मा एक फ्लैश छ तपाईंलाई बताउन लेखेर छु
माथि उठ्नेछ र खडा हामीलाई बताउन हामी एक cryer आवश्यक कसरी I'ma रिटायर?
तिमिलाइ योजना जाँच
मेरो दोस्त, भनेर गम्भीर आफ्नो घर छैन
तपाईं भूमिगत बाटो धेरै लामो भएको कारण
छ तपाईंको ढुङ्गामा मिति संग गहिरो
उनि भन्छन् सबै, "त्यो केटा गएका"
चलो, तपाईं केहिपनि घर जाने?
तपाईं केहिपनि क्लोन भन्दा बढी गर्छन्?
के तपाईं प्रेम गरिरहनु थाह…
मेरो नयाँ पुस्तक, उठेर, बाहिर जनवरी 27 आउँछ! जहाँ पुस्तकहरू बेचिन्छ यो उपलब्ध हुनेछ. You can pre-order it now and visit the book website at Risebook.tv. म प्रभु उठ मेरो पुस्ता प्रोत्साहन गर्न प्रयोग गर्नेछ प्रार्थना र बाँच्न. माथिको ट्रेलर हेर्न र तल पुस्तकको एक संक्षिप्त विवरण पढ्न:
समाज भन्छन् युवा स्वतन्त्रित आत्म-अभिव्यक्ति लागि समय छ, तर यात्रा ली भन्छन् परमेश्वरको निदाउनु देखि वृद्धि गर्न सबैलाई भनिएको छ, कम आशा माथि, र बौरिउठ्नुभएको राजा लागि बाँच्न.
विश्व हाम्रो प्रारम्भिक वर्ष irresponsibly भन्दा आनन्द उठाउन गर्न अर्थपूर्ण पेसामा समर्पित छन् भनेर हामीलाई बताउँछ. हामी जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता हो बोझ सकेसम्म लामो पन्छाउन गर्न बताए हुनुहुन्छ. र त्यसैले, हामी माथि प्राप्त गर्न बाध्य हुनुहुन्छ सम्म हामी भन्दा निदाउनु-सुतिरहेको जीवन मा एक दुःखी अवस्थामा हाम्रो युवा खर्च. समस्या जीवन पहिले नै शुरू भएको छ भन्ने छ. यो अहिले भइरहेको छ. अनि परमेश्वरले तपाईंलाई यो बाँच्न भनिएको छ.
यो शक्तिशाली पुस्तकमा, यात्रा ली यसलाई उठ्नु समय र वृद्धि हो तर्क छ, हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न. युवा वा पुरानो, हामी उहाँलाई लागि बाँच्न भनिन्छ गरिएको छ. दायाँ…
एक जोडी महिना पहिले म एक ब्रान्ड नयाँ एल्बम घोषणा गरेर सबैलाई अचम्ममा, “उठेर.” तपाईंले यसलाई मेरो लेबल अघि यसको बारेमा शान्त राख्न कसरी गाह्रो थियो बुझ्दैनन् र म सार्वजनिक भयो. एल्बम एक वर्ष भन्दा लागि काम मा भएको थियो, र म सबैलाई बताउन प्रतीक्षा सकेन - विशेष गरी म केही नयाँ कुरा गिर थियो सोधेर राखिएको गर्नेहरूलाई.
प्रतिक्रिया हालसम्म गहिरो उत्साहजनक भएको छ. म अन्तिम दुई वर्ष धेरै शान्त भएको छु तापनि म मान्छे मलाई समर्थन जारी गरेको छक्क छु. तपाईंको प्रेम र उत्तेजना मेरो मात्र बढेको छ.
द्वारा म छक्क थियो प्रतिक्रियाहरू को एक यो एक थियो: "प्रतीक्षा, म सेवानिवृत्त लाग्यो?"यो एक छाया जस्तै मलाई वरिपरि निम्नानुसार प्रश्न छ. म मा यो सम्बोधन गर्नुभएको साक्षात्कार, ट्वीट, र ब्लग पोष्टहरू, तर म यसलाई केही गर्न अस्पष्ट अझै पनि छ थाहा. मलाई रेकर्ड सीधा सेट गर्न प्रयास जारी गरौं: म कहिल्यै सेवानिवृत्त.
मा 2012, म हुन चाहन्छु घोषणा "संगीत बाट टाढा stepping।" हो, मलाई थाहा छ कि अवकाश-इश सुनिन्छ, तर म जानबूझ कि शब्द प्रयोग गरेनन्. म थिएन किनभने म यो जानीबुझी अस्पष्ट राखिएको 100% sure what it would…